ILake House yethu - Ukuzola Okulula - I-Airbnb
ILake House yethu - Ukuzola Okulula
ILake House yethu eSouth Yunderup iyi-villa ye-3x2 eziqukethwe yona ngokwayo. Kusele ihora nje ukusuka ePerth CBD kodwa isikhathi esanele sokuthi ushiye zonke izinkinga zakho ngemuva. I-Villa ibheke Ichibi elihle futhi lakhiwe ukuthi libe ikhaya kude nasekhaya. Singeze ukuthinta okunethezeka okumbalwa ukuze uzizwe ucekelwe phansi. Kungakhathaliseki ukuthi ufika nini sizoba nakho konke okudingayo ukuze sikuqale ngokuhlala uphumule.
Sicela uqaphele ukuthi Amagumbi Avamile asalungiswa futhi asavaliwe ngalesi sikhathi - hlala ubukele . Kodwa-ke leli chibi livuliwe ukuthi lisetshenziswe ehlobo futhi izinkantolo zethenisi zihlala zivuliwe unyaka wonke.
Kukhona i-Reverse Cycle Air Conditioner endaweni e-Main Living kanye ne-heater yezinkuni. Sine-Smart TV engu-58 intshi, i-Wifi ne-Netflix. Ikhishi linakho konke okudingayo ukuze uzenele okuhlanganisa iMicrowave, Umshini wokuwasha izitsha, i-Rice Cooker kanye nomakhi wamasemishi amakhulu. I-Main Bedroom inoMbhede Wendlovukazi Omuhle, iwindi elikhulu lekhona elibheke eChibini. Iphinde ibe neMirrored Robe enkulu, iTV kanye neBathroom enkulu eyi-ensuite. Igumbi Lokulala Lesibili linemibhede emi-2 Eyodwa futhi lilungele izingane. I-3rd Bedroom (esiyibiza ngokuthi I-Butterfly Room) inombhede Wendlovukazi kanye nokubuka kancane kweChibi. Kukhona Iwashi elinomshini wokuwasha, u-ayina, nelinye iBathroom.
I-Verandah enkulu enhle ibheke Ichibi eligcwele i-Koi futhi uzohlala ubona amadada, uvamise ukubona ama-Swans futhi ngezinye izikhathi ubona i-Pelican engavamile ibhukuda. Sihlinzeka nge-starter pack yezinto eziningi ezibalulekile ukuze wenze ikhabethe noma ube neshawa eqabulayo lapho ufika.
Sicela uqaphele ukuthi sikhetha kakhulu ukuthi sivumela bani eLake House yethu. Lesi sakhiwo senzelwe abantu abangu-6 kuphela ngokunethezeka futhi singanela Osana Embhedeni Wase-Porta. Sicela ubheke ukucushwa kwegumbi lokulala ukuze kumiswe umbhede. Azikho Izilwane Ezifuywayo Ezivunyelwe. Sizobe sibuza imibuzo ejwayelekile ngaphambi kokuthi sigunyaze ukubhukha.
Uhambo olufushane kuphela ukusuka e-Villa kukhona i-Jetty's Bar & Grill lapho ungathola khona Ukudla Okumnandi neziphuzo ezibandayo ezibandayo. Ibheke uMfula iMurray Enhle lapho ungajabulela khona izinto ezithile. ILake House yethu inamaKayaks ongawasebenzisa. I-Sandy Cove iyimizuzu emi-5 kuphela ngemoto eneTavern nezindawo zokudlela ezimbalwa kanye ne-Boat Ramp yonke etholakala eduze kweCanals. Kukhona neRavenswood Tavern okuyimizuzu emi-5 kuphela enye indlela futhi etholakala osebeni lomfula iMurray.
Sihlala sifinyeleleka ngefoni ukuze sikusize noma kunjalo. Sihlala ihora kodwa kunomphathi wesayithi eComplex esingathintana naye kanye noMhlanzi wethu ohlala endaweni nganoma yini ephuthumayo.